Bianca kanjani ubudala, Belarusian R'n'B inkanyezi
Eminyakeni embalwa edlule nomculi odumile Bianca isinyathelo ngaphansi kwegama Yana Lipitskaya. Kwaba igama lakhe esigabeni, okuyinto ngokushesha wakhala omunye, exotic kakhudlwana. Igama langempela lomuntu intombazane - Tatiana. Waqala umsebenzi wakhe ngo-2001. Futhi manje kwaba ncamashi engu-13 ubudala, futhi ubuhle abasha namanje ebukekayo, kodwa selibe izikhathi eziningi kakhulu. Ufuna ngokusebenzisa omfisha ngomculi, abaqondi Bianca emingaki, ngoba kubonakala sengathi yonke intombazane encane, usengozini futhi sengozini efanayo.
Youth Tatiana Lipitsa
Tanya Lipitsa ozalwa 17 Septhemba 1985 e Belarus (Minsk). Zonke ngiseyingane intombazane enhle wahlanganyela umculo. Ngaphezu kwakho konke yena besho nokusho Russian R'n'B kazwelonke.
Ngemva kwesikhashana, uBianca waqhubeka uhambo eJalimane. Yena waletha repertoire yezakhamuzi zendawo, eyaqamba yena. Abaningi bayokuthi umangale ukuthola ukuthi ubudala Bianca kwaba ngaleso sikhathi lapho wanquma ukuthatha lolo shintsho olukhulu ekuphileni kwakhe. Kulula kabi: e engu-nesikhombisa umculi osemusha waya eJalimane. Ngo-2001 yena waba nengxenye namanye amazwe we abadlali osemusha okuthiwa "Mallow" futhi ngek Grand yakhe yokuqala Prix. Ukuqhubeka ukudlala umculo futhi bahlanganyele imincintiswano ehlukahlukene, umculi uye ayalolongwa amakhono akhe kanye ithalente yabonisa.
Namuhla, wonke umuntu uyazi ubuhle Bianca ngenxa ukubunjwa yayo engavamile. Ngo-2005, umculi Ezifuna ahlinzekwa ukuya emncintiswaneni "Eurovision" futhi bamele Belarus, kodwa wenqaba. Umculi ubukeka abasha kanjalo, kuba ethandwa, enhle, abanamakhono, akumangalisi ukuthi abalandeli abaningi banesithakazelo Bianca emingaki.
Amaqiniso ethakazelisayo evela ukuphila avela kuye lo oculayo
No kancane ezithakazelisayo abalaleli Bianchi kuyoba ngokuphila ukuma imingcele yakhe siqu. Kusukela uphawu zezinkanyezi Lipitsa - intombi ukuphakama salo 163 cm nesisindo - 58 kg. Eminyakeni yokuqala, lapho yena wayecula ekwayeni lendawo, waxoshwa, njengoba othisha ayikuthandi ukusebenza ababezibheka ithalente abasha. Kusukela ngaleso sikhathi, uye wathuthela e ezihlukahlukene studio. Kamuva ngabo wathola ithuba ukusebenza iphrojekthi "Serge."
Ngo-2005 yena aqoshiwe Max Lawrence hit ngokuthi "I Swan." ngokushesha Soundtrack kwaduma nabalandeli kanye kwakuhambisana nezinga movie "Shadow Boxing", njengoba ifakwe ngempumelelo e amapulanka movie. Igama lomsebenzisi Bianca yavela ngemva nje ngokubambisana neNhlangano Sergey.
Ngemva inkanyezi abasha wazizwa inkazimulo futhi wabona ukuthi uthanda abantu, wayezimisele ukwenza revolution real emkhakheni R'n'B. Ngaphambi kwalokhu ke lokhu akusebenzanga ubani. Ngokungafani yonke isitayela yayo - kuba phambi inhlanganisela lyricism nomculo wamuva nge Russian Folk amathuluzi. Ngemva Bianca esethwe ku, yena ezikhishwe i-albhamu iculo nambili ukuthi ngikwenze ngokugcwele yonke imibono enhle. Ikhava lihlotshiswe isithombe ekhexisayo. Bianca - Umculi, owanqoba ibalula zabo, amashumi ezinkulungwane izinhliziyo futhi baqhubeke benza okwengeziwe.
Isici avela kuye lo oculayo wukuthi Uyabhala zonke izingoma futhi wonke alinganayo Thixo wakhe - Beyoncé. Lapho ubona umculi osemusha kumabonakude, nje ufuna ukwazi ukuthi ubudala umculi uBianca. Ungase umangale ukuthola ukuthi, kodwa yena kwaba 28, nakuba ukubukeka futhi ningathuli 18. Ngethemba ukuthi isikhathi eside ziyojabula abalandeli hits entsha okukhethekile.
Kuze kube manje, uBianca eqoshiwe albhamu amahlanu ethandwa, izinkanyezi ku nambili Ukugunda futhi wahlabelela Duet nge abaculi abadumile. Manje kwaba sobala ukuthi kungani wonke umuntu unesithakazelo Bianca emingaki, ngoba kungakusiza kodwa ungakhathazeki mayelana nomphefumulo womuntu. Ngaphezu kwalokho, ngokufunda Thixo ukwaziswa okwengeziwe, abalandeli usondela kancane izinkanyezi zawo.
Kazarnovskaya Lyubov: Biography, umndeni, umsebenzi
Abahlanganyeli "Eurovision" ezivela eRussia zonke zonyaka, zonke iminyaka: uhlu
Divertimento - iyinhlangano uhlobo zomculo
Iqembu Slade: edwaleni 'n' roll enesigqi esinamandla
"Ketoprofen" (amafutha). Amafutha "Ketoprofen": imiyalo, ukubunjwa, ama-analogues, ukubuyekezwa
Lokhu pilaf nemifino asithena
Ezimayini zikasawoti Soledar: incazelo, umlando, indawo kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Isikhathi esingakanani ukupheka nezimfanzi
I lamadolobha amahle kakhulu e-Ukraine futhi ezikhangayo zabo
Guar gum: ukuthi kuyini futhi lapho kusetshenziswe
Zokuhlala Inxanxathela "Ukudoba Fort" e saseNevsky lesifunda saseSt Petersburg: incazelo, intuthuko ukwakhiwa
Ukuvuvukala kwezigulane ze-paranal ekati: izimbangela, izimpawu kanye nokwelapha
Izinwele zika-haircuts ngezinwele eziphakathi, izinwele ze-wavy ezinezingulube